८० वर्षीया वृद्धाको ३५ वर्षे पुरुषसँग विवाह ! बोल्न छाडे नातिनातिना | Safal Khabar
८० वर्षीया वृद्धाको ३५ वर्षे पुरुषसँग विवाह ! बोल्न छाडे नातिनातिना
शुक्रबार, ३० माघ २०७७, ११ : ३९
एजेन्सी । भनाइ नै छ, प्रेम अन्धो हुन्छ । प्रेममा उमेर, जातपात, धर्म, धनी गरिब, कालो गोरो केहीले असर पार्दैन । प्रेमले कुनै पनि बन्देज तोड्न सक्छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, बेलायतको एक विवाह । जहाँ ८० वर्षीया एक वृद्धाले आफूभन्दा ४५ वर्षकान्छा अर्थात ३५ वर्षीय युवकसँग विवाह गरेकी छन् ।
बेलायत निवासी आइरिस जोन्स नामक वृद्धा महिलाको इजिप्ट निवासी ३५ वर्षीय युवक मोहम्मद इब्राहिमसँग फेसबुकबाट चिनजान भयो । दुबैमा घण्टौसम्म कुराकानी हुन थाल्यो । लामो समयदेखिको कुराकानीपछि इब्राहिमले आइरिसलाई प्रेमको प्रस्ताव राखे । यसैबीच आइरिस इब्राहिमलाई भेट्न इजिप्ट पुगिन् ।
भेटपछि अन्ततः आइरिस र इब्राहिमले गोप्य रुपमा विवाह गरे । विवाहपछि धेरैले इब्राहिमले आइरिससँग धनसम्पतीकालागी विवाह गरेको टिप्पणी गरेका छन् । तर इब्राहिमले भने उनले आइरिसलाई धनकालागी नभई प्रेमले नै विवाह गरेको बताएका छन् । आइरिसले श्रीमान इब्राहिमको धर्म मुस्लिम धर्म स्वीकार गरेकी छन् । यी दुबैको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको छ ।
विवाहपछि आइरिस एक रियालीटी शोमा समेत भाग लिएकी थिइन् । जहाँ उनले आफ्नो यौन जीवनका बारेमा खुलेर कुरा गरिन । उनका अनुसार हनीमुनपछि उनका छोराछोरी र नातीनातीनाले उनसँग कुराकानी गर्न बन्द गरेका छन् । आजकल आइरिस आफ्नो श्रीमान इब्राहिमको साथमा इजिप्टमा बस्दै आएकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नयाँ सरकार बन्ने यस्ता छन् ४ विकल्प ?